Cordial welcome to eTradeMyanmar.com! Join Free | Sign up | Help | Translate this page
SEARCH All Post Offer Alert Office News Crop Profile Contact Us About Us Pulses Advertisement English Version Transportation Features and Products Custom Data Directory Download Consulting and Advising Poll Forum News comment RSS Interview Links About Support MIS Report Weather Report Crop Situation Custom Trade Data Knowledge Data Biz Astro View Forex Market Watch SMS Post Offer Article Events Shipping Price News
If you don't see Myanmar Font
ုကက်သနြ်၊ ငရုတ်၊ အာလူး
Myanmar Banking & Payments Conference
Selected City Yangon Mandalay Bago Pathein
Current Time On Yangon
Myanmar-Austria Business Matching
ထိုင်ိးုိံင်ငံ ဘန်ကောက်္ဘမြိႚအေူခစိုက်ူမန်မိာုိံင်ငံဆိုင်ရာုသစဋ္ဌတီးယားသံအမတ်ဋ္ဌကီး H.E. Dr. Enno Drofenik ဦးဆောင်သည့်ုသစဋ္ဌတီးယားကုမဍ္ဎဏီ (၂၂) ခုမြ စီးပြားရေးလုပ်ငန်းရငြ်(၅၀) ဦးခန်ႚပၝဝင်သော ကိုယ်စားလယ်ြအဖြဲႚသည် ကုန်သည်စက်မအြသင်းခဵပ်ြသိုႛ လာရောက်ကာ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာလုပ်ငန်း၊ ထောက်ပံ့ပိုႚဆောင်ရေိးံငြ့် သယ်ယူပိုႚဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ အဋ္ဌကီးစား ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး စက်ကိရိယာလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝၝး၊ ဆေးပင်္စည်ိးံငြ့် ဆေးရုံသုံးစက်ကိရိယာလုပ်ငန်း၊ စက်ပင်္စည်းကိရိယာလုပ်ငန်း၊ စက်မက္ပြသုံး ရေထိန်းသိမ်းမလြုပ်ငန်း၊ စတီးလ်လုပ်ငန်း၊ မော်တော်ယာဉ်သုံးစက်ကိရိယာလုပ်ငန်း၊ သက်မြေးပညာလုပ်ငန်း၊ ပတ်ဝန်းကဵင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း၊ိုံႚိံငြ့်ိုံႚထက်ြပင်္စည်းလုပ်ငန်း၊ ရေအားလြဵပ်စစ်လုပ်ငန်း စသည့်လုပ်ငန်း က္ပမဵားကိုမန်မာစီးပြားရေးလုပ်ငန်းရင်ြမဵာိးံငြ့် အကဵြိးတူပူးပေၝင်းဆောင်ရကြ်ိုံင်ရေိးံငြ့် ရင်ြးီံူးမပြ်ြိံမြူပလြုပ်ိုံင်ရေးတိုႚအတကြ် စီးပြားရေးက္ပမဵားအလိုက်တြေႚဆုံ ဆြေးြေိံးပြဲ ကဵင်းပူပလြုပ်မည်ူဖစ်သည်။
(Cocktail Reception: ၁၈း၃၀နာရီမြ ၂၁း၀၀နာရီ၊ ကုန်းဘောင်ိံငြ့် တကောင်းခန်းမ၊ (၃)လြာ၊ ဆူးလေရန်ြဂရီလာဟိုတယ်) -ူမန်မာလုပ်ငန်းရင်ြမဵားအနေူဖင့်ုသစဋ္ဌတီးယားလုပ်ငန်းရင်ြမဵာိးံငြ့် ခဵိတ်ဆက်ကာ အကဵြိးတူ ပူးပေၝင်းလုပ်ဆောင်ိုံင်ပၝရန် ဖိတ်ုကား အပ်ပၝသည်။ူမန်မာ့အသေးစာိးံငြ့် အလတ်စားလုပ်ငန်းရင်ြမဵား တက်ရောက် အခငြ့်အရေးရယိူိုံင်ပၝရန် အထူးဖိတ်ုကားပၝသည်။
တက်ရောက်လိုသည့် လုပ်ငန်းရင်ြမဵားအနေူဖင့် ကုန်သည်စက်မအြသင်းခဵပြ်ိုိံင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန အီးမေးလ် - ird@umfcci.com.mm ဖုန်း - ၀၁ ၂၃၁၄၂၄၄ လိုင်းခြဲ ၁၂၁၊ ၁၂၂၊ ၁၂၃ သိုႚ မတ်လ ၂၄ ရက်နေႛနောက်ဆုံးထား အေုကာင်ူးပန်ုကားပေိးုိံင်ပၝသည်။
ကဵင်းပမည့်နေႚရက် - ၂၉.၃.၂၀၁၇ ရက်နေႚ (ဗုဒ္ဌဟူးနေႚ)
ကဵင်းပမည့်အခဵိန် - ၁၄း၀၀နာရီ မြ ၁၇း၀၀နာရီ (Business Matching)
ကဵင်းပမည့်နေရာ - မဂဿလာခန်းမ၊ ဒုတိယထပ်၊ကုန်သည်/စက်မအြသင်းခဵပြ်။
[Support] : Transportation | Commerce | Banks| Insurance | Customs | Knowledge Myanmar | Travels | Useful Links
[Site Info] : Home| Contact Us| About Us | Comments | | Make your Home|
Copyright © 2008 www.etrademyanmar.net All Right Reserved.